Nandritry Ny Eid al-Fitr, Nahazo Fandraisana Tsara Tao Taiwan Ireo Indoneziana Raha Oharina Tamin’ny Taona Maro Lasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2015 12:20 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Español, Français, English
Reny Indoneziana iray mitondra ny zanany lahikely manatrika ny fankalazana ny Eid al-Fitr teo anoloan'ny Toby fiantsonana ao Taipei. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'ny “4-Way Voice”
Nandritry ny faran'ny herinandro 18 sy 19 Jolay, marobe ireo Indoneziana monina any Taiwan no nanaja ny Eid al-Fitr, ilay fialantsasatra ho an'ny Silamo izay manamarika ny fiafaran'ny volana masin'ny fifadian-kanina antsoina hoe Ramadàny. Manao fankalazàna eny amin'ireo kianja ho an'ny daholobe izy ireo, isan'izany ny Toby fiantsonan'ny fiarandalamby ao Taipei sy ny “228 Memorial Park” ary hatramin'ireo maoske lehibe manerana ny firenena.
Marobe ireo mponina ao Taiwan no nifaly nahita ny toerana fanaovana fetibe voaloko nahafinaritra, zavatra izay sarotra ninoana ny haka sary an-tsaina azy taona vitsy tany aloha.
Tamin'ny 2012, nohodidinin'ny Fitantanana ny Lalamby ao Taiwan ireo Indoneziana izay nankalaza ny Eid al-Fitr tao anatin'ny toby fiantsonan'ny fiaran-dalamby tao Taipei ary nangatahan-dry zareo hiparitaka, tamin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo. Tsy niresaka momba izay vondrona vitsy an'isa izany ireo mpampita vaovao mahazatra, fa kosa nanameloka ny antsoin-dry zareo hoe fanararaotana tafahoatra ny fampiasana ireo toerana natao ho an'ny daholobe. Nahatsiaro ho voahavakavaka tamin'izany ny vondrom-piarahamonin'ireo Indoneziana.
Maro ireo ONG manome tohana ho an'ireo mpiasa mpila ravinahitra no nanao hetsika nanoherana ny Fitantanan'ny Lalamby ao Taiwan, tamin'ny fanantenàna fa mba haneho fanajàna misimisy kokoa an'ireo Indoneziana Silamo ny manampahefana. Kanefa, nitranga indray ny fifandonana tahaka izany tamin'ny 2013.
Nihatsara ny toe-draharaha tamin'ny 2014 satria nifanome tànana tamin'ireo ONG sy ny vondrom-piarahamonin'ireo Indoneziana ireo mpitantana vaovao ny Lalamby tao Taipei mba hanomanana ilay fetibe. Tsy hoe fotsiny nankalazaina tsy nisy resabe ny Eid al-Fitr, fa koa natao indrindra ilay hetsika ho fanabeazana ny mponina ao Taiwan mba hahatakatra/hamantatra ny kolontsaina sy ny fombam-pivavahan'ireo Silamo namany.
Amin'izao fotoana izao, manodidina ny 250.000 ireo Indoneziana monina ao Taiwan. Manodidina ny 230.000 ireo mipetraka any noho ny asany, raha 20.000 kosa ireo nifindra monina tanteraka ho ao Taiwan.
Tamin'ity taona ity, ho fanampin'ny toby fiantsonan'ny fiaran-dalamby tao Taipei, dia nisy ireo toerana nanaovana fetibe tsara karakara kokoa. Ny Ministeran'ny Asa ao Taipei dia nanomana toerana ho an'ilay hetsika teo akaikin'ny “228 Memorial Park”, ary maoske lehibe dimy nanerana an'i Taiwan koa no nampiantrano fankalazàna ny Eid al-Fitr.
Ny “4-Way Voice”, gazety iray miresaka manokana ireo mpiasa mpila ravinahitra avy any Azia Atsimo Atsinanana, nitatitra momba ny fankalazana natao tao amin'ny fiantsonana tao Taipei :
Maro ireo Indoneziana mpiasa no nila niverina namonjy haingana ny asany taorian'ilay hetsika. Ny sasany tsy afaka nankalaza ny taombaovao niaraka tamin'ireo Indonieziana mpiray fiaviana aminy, noho ny antony asa, na noho ny resaka fitaterana. Kanefa, tsy olana ny toerana misy ireo Silamo mpamaky anay, irinay “4-way Voice” ny mpamaky anay mba hanao Eid al-Fitr sambatra. Selamat Hari Raya Idul Fitri.
Ny toerana vonjimaika nasiana rano madio nomanina ho an'ireo Silamo nanatrika ny fankalazana. Sary avy amin'ny “4-Way Voice”.
Nohararaotin'i Tien-Wan Chang, izay manana vehivavy Indoneziana miasa manampy azy, ilay fotoana mba hisaorana azy tao amin'ny Facebook:
Iriana mba hiaina tontolo andro finaritra ireo Indoneziana mpiasa rehetra izay miasa mafy. […] Mitàna toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny fanomezana tolotra fiahiana eto Taiwan izy ireny. Raha tsy misy azy ireo, fianakaviana 480.000 manana beantitra tsy afaka intsony eo ampandriana no tsy ho tafavoaka amin'ny fiainana. Tsara vintana koa izahay manana anjely iray ato anivon'ny ankohonana tato anatin'ny taona vitsy izao: izy no mikarakara ahy taorian'ny fandidiana natao ahy, izy no mikarakara ny rafozandahiko mandra-pahafatiny, ary izy no mikarakara ny rafozambaviko efa tena antitra dia antitra tsy mahetsika eo ampandriana. Manampy ny rafozambaviko mba hivadi-mandry eo ampandriana izy, mikarakara ny fantsona fampidiran-kaniny, mampandro azy.[…] Eid al-Fitr androany. antenaiko fa hisitraka/hifaly amin'ilay fialantsasatra ry zareo, ary faniriako ny hisaotra azy ireo.
Chih-An Chen, izay mampiasa Indoneziana mpiasa an-trano mba hanampy azy ihany koa, dia namaritra ny fomba nankalazàny ny Eid al-Fitr niaraka tamin'ilay vehivavy mpanampy azy :
Ho an'ireo Silamo manerantany, Ramadany amin'ity taona ity ny 18/06 hatramin'ny 17/07 , ary tsy very anjara amin'izany i A-Ting, ilay mpanampy ato anivon'ny fianakavianay. Tsy mahazo mihinana sy misotro izy aorian'ny fiposahan'ny masoandro. Niteny taminay izy fa tsy mahazo mihinana alohan'ny amin'ny 6ora sy 50 min hariva. Tena nafàna be tamin'ity volana ity, ary dia tsemboka ihany izahay na tsy mihetsika mankaiza aza. Asa mafy ho azy ny hitondra an-draiko ho an'ny amin'ny toby fanarenana amin'ny alàlan'ny fiara fitateran'ny toby ny Alatsinainy, Alarobia ary Zoma sy hitondra azy mitsangantsangana ny Talata sy Sabotsy. Efa akaikin'ny fiafaràn'ny Ramadàny, ary tsy ela dia hiditra amin'ny Eid al-Fitr ry zareo, izay taombaovao any Indonezia ary fialantsasatra manana ny maha-izy azy ho an'ny Silamo. Androany (16/07) niteny izy fa mba te-hividy akanjo vaovao, araka izany dia nandeha niantsena niaraka taminy aho ary dia nihety volo izy.
Ny sakafo nentin-drazana ho fankalazana ny Eid al_Fitr ao Indonezia. Sary avy amin'ny Spice-up Tasat
Ny “Spice-up Tasat”, vondrona iray misy ireo vady tsy avy ao Taiwan fa avy any amin'ireo firenena samihafa ao Azia Atsimo Atsinanana, dia manao fihaonana tsy tapaka hifampizaràna ireo hainahandro avy any amin'ny tany niaviany. Mikarakara “ketupat” ry zareo, ilay sakafo nentin-drazana Indoneziana ho an'ny Eid al-Fitr, amin'ny 17 Jolay:
Ny “Ketupat” dia hainahandro nentin-drazan'ny Indoneziana. Mandrary ravina voanio maitso izahay mba hanana endrika diamondra. Avy eo asianay vary ao anatiny ary atono. Hitombo tsikelikely ny vary ary hitambatra tsara rehefa avy noporetina. Rehefa mihinana azy izahay, tetehanay ho madinidinika izy io ary hanina miaraka amin'ny “sate”, “curry”, na lasopy toy ny “soto ayam”.
Na dia mihinana amin'ny fotoana mahazatra aza izahay, marobe ireo Silamo mitahiry ny nentin-drazana no mikarakara “kupat” manokana hatao fanomezana amin'ny “Eid al-Fitr”.
Lazain'ny olona sasany fa ny “kupa”t no endriky ny “ketupat” ho an'ireo mponina ao Java, izay fanekena ny hadisoana, araka izany dia mety natao handinihantsika tena izy io ary hamelàna ny hafa raha toa isika ao anatin'ny “Eid al-Fitr” ka manolotra “ketupat” ho fanomezana ho an'olon-kafa.
“Angamba ny mety ho zava-dehibe dia ny fitondràna ny rehetra ho tafangona. Ny hasarotry ny fandrariana ny “ketupat” dia mampiseho ny fomba mahafinaritra fifampidiran'ny olona samihafa,” hoy i Lily.
Ao anaty firenena iray ahitàna nosy maherin'ny 13.000, foko 360 ary fiteny miisa 719, tsy olana loatra ny hiantsoantsika azy ho “ketupat”, na “kupta”, na “tipat” na inona dikan'izy ireny.
Ny zava-dehibe dia nifàrana ny Ramadàny, ary miara-manomboka amin'ny tsinambolana ny taona vaovao.